Ọnwụ abụghị ihe na-ewute ọtụtụ Inés Plana bụ onye na-ere ahịa kacha mma n'afọ? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ana Lena Rivera Muniz | | Akwụkwọ
Anwụ anwụ abụghị ihe na-akacha ewute es la akpa akwụkwọ nke onye edemede edemede, Ines Plana, ma ọ nọ n'ụzọ ọ ga - abụ otu n'ime ahịa kacha elu nke afọ. Mmetụta dị otú ahụ na fim mbụ bụ ihe ọhụrụ. Ọ bụ eziokwu na ọ nwere ọtụtụ ogidi iji mezuo ya:
El un̄wam otode akamba asuanetop: N'ihe banyere nkwado nke akwụkwọ ahụ na mbipụta okomoko nke ejiri ebipụta ya, ọ bụ nnukwu ntinye aka nke Editorial Espasa maka afọ a.
Un ụdị ejiji: O bu oji, onye oputara onu, ihe omuma.
una ezigbo akụkọ: Chọpụta mkpụrụ obi nke ndị protagonists, site na onye ahụ na onye gburu ọchụ site n'aka ndị nche obodo na-enyocha ikpe ahụ. O nwere ezigbo nkata ebe ihe karịrị ịtụnanya na-enweghị isi. N'ime akwụkwọ ọgụgụ a, ndị n'ihi na S na otú na nke kachasị, mmetụta mmetụta uche nke ihe omume ndị ahụ na nchọpụta ha na-ewetara ndị metụtara akụkọ ahụ dị mkpa.
Guzo mgbe ị na-agụ ihe Anwụ anwụ abụghị ihe na-akacha ewute que onye ọ bụla nwere nsogbu, ndị ọma, ndị ọjọọ na ndị na-egbu maramara. Ọ bụ okike noir na onweghi ozu na-efu efu na ọbụna ezigbo dose nke sadism na obi ọjọọ. Bụlagodi, nyocha nke mmetụta uche bụ isi ederede nke akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ bụghị oge dị mma maka ihe ọ bụla n'ime ihe nkiri ahụ, ọbụnadị maka pusi, onye nke nta nke nta na-aghọ onye ọzọ maka onye na-agụ ya, mgbe ọ tụgharịrị peeji ole na ole n'emeghị ka ọ pụta, ọ na-eche banyere ya.
Greta zoro n'ime Lieutenant Julian Tresser ndụ iji nọrọ na ya.
Inés Plana na-ewetara anyị akụkọ ọbara na mwute, ọ dịghị ebe olileanya dị Na ihe omume nke akụkọ ntolite, ọbụnadị na ihe ndị pụtara ìhè, mmadụ nwere ike inwe olile anya maka ihe ọma site na ihe ndụ na-eweta mgbe e mesịrị maka ndị, mgbe ahụmịhe ndị a, ka nwere ohere.
"Ọ maara nke ọma na ndị ọrụ nchekwa obodo bụ otu ndị ọkachamara nwere ọnụọgụ kacha egbu onwe ha, mana ọ tụleghị ndị isi ya nwere ike igbu onwe ha."
Ọ bụ ọrụ izizi nke, ọ bụ ezie na ị na-akwanyere ntọala nke ụdị ahụ ùgwù, na-apụ site na clichés na stereotypes na-apụta ma na-aga ebe ha si. Akwụkwọ ọgụgụ nke ndị ọjọọ dị nnọọ njọ, ndị dị mma bụ mmadụ na ebe obi ụtọ ga-abịa, ọ bụrụ na ha emee, na mpụga ibe ha.
"Julian nwetere njide onwe onye nke na ọ na - eme ya obi ọjọọ oge ụfọdụ: njide onwe onye nke ukwuu nwere ike gbasaa akparamaagwa ya na otu puku iberibe, ụbọchị a na - atụghị anya ya na ikekwe n'ihi ihe na - adịghị mkpa kpamkpam."
Anyị nwere olile anya ịgụrụ Inés Plana ọhụụ ọhụụ nke Lieutenant Julián Tresser na Corporal Coira gụrụ, anyị nwere olile anya na ka ọ na-erule mgbe ahụ, ndụ ga-emeso ha ntakịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Dyingnwụ anwụ abụghị ihe na-ewute Inés Plana onye kachasị ere ahịa n'afọ.
Na nsonaazụ nke nkata ahụ, ha ekwughi ihe ọ bụla? Idozi ya na ndabara? Echere m n'ezie na ọ bụ akwụkwọ ọjọọ: ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na obere ihe odide, nkata dị anya nke na ọ juru ya anya na njedebe ahụ na-eme ka ịchọrọ ịtụfu akwụkwọ ahụ: ihe onye edemede ahụ mere bụ ileda anya na ileda onye na-agụ ya anya. Agaghị m akwado ya, n'ezie.
Nke a, dịka ihe niile na ndụ, bụ ihe uto. Ikwuru eziokwu na odighi onye n'ime agwa a dị nso n'omume ọma, ha niile nwere isi okwu na-adịghị mma, ụfọdụ na-egbochi ndị na-agụ ya inwe mmasi maka nke ọ bụla. N'aka nke ozo, o na eme ha mmadu. Anyị na-atụ anya na ị ga-agwa anyị ihe ị ga-akwado maka akwụkwọ akụkọ mpụ ugbu a, anyị ga-enwe obi ụtọ ịgụ ma kwuo.
Akwụkwọ Spanish kacha mma n’akụkọ ihe mere eme